Xarumaha Caafimaadka Bulshada - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Ku saabsan CHPW > Xarumaha Caafimaadka Bulshada
Xarumaha Caafimaadka Bulshada
Baro sida shabakadeena Xarumaha Caafimaadka Bulshada ay ugu adeegi karaan caafimaadkaaga, oo ay daryeel uga heli karaan adiga kuugu dhow.
Baro bukaan socod eegtadaada
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) wuxuu leeyahay shabakad ballaaran oo dhakhaatiir iyo rugo caafimaad ah oo ku baahsan gobolka. Laakiin waxaan iskaashi gaar ah la leenahay Xarumaheena Caafimaadka Bulshada (CHC) oo dib u soo laabanaya ku dhowaad 30 sano.
CHPW waxaa aasaasay 1992 koox ka tirsan Washington CHCs. Waxay isu yimaadeen si ay u sameeyaan qorshe caafimaad oo la wadaagaya hadafkooda ah inay helaan daryeel bulshooyinka Washington.
Waa maxay CHCs maxayse uga duwan yihiin noocyada kale ee rugaha caafimaadka?
Rugahan caafimaad waxay ka mid yihiin shabakadda badbaadada caafimaadka dadweynaha. Ururada bulshada (CHC) qofna kama celiyaan iyagoo ku saleynaya awooddooda ay ku bixinayaan daryeelka.
Shabakada gobolka oo dhan ee CHPW 21 CHC waxay ka shaqeeyaan in ka badan 190 rugaha caafimaadka.
Ma jiraan laba CHC oo isku mid ah, waadna heli kartaa daryeel iyadoon loo eegin sharciga socdaalka.
CHCs waxay bixiyaan dhakhaatiir iyo adeegyo kala duwan
CHPW waxay la shaqaysaa 21 CHC-yada la-hawlgalayaasha ah. CHC-yadan waxay ka shaqeeyaan in ka badan 190 goobood oo aad ka heli karto daryeelka aasaasiga ah in ka badan 3100 bixiye. Intaa waxaa dheer, CHC-yadu waxay bixiyaan helitaanka dhakhaatiir takhasus leh oo qaarkood waxay bixiyaan adeegyada caafimaadka ilkaha, aragga, iyo dhaqanka.
CHCs waxay bixiyaan adeegyo adiga laguugu talagalay
Sababtoo ah waxay u heellan yihiin inay u adeegaan bulshooyinka ay ka shaqeeyaan, CHCs ayaa bixin kara adeegyada loogu talagalay kama heli doontid xarun uun.
Raac talaabooyinkan si aad uhesho CHC kuu dhow:
Naga tag qalabka raadinta bixiyaha
Waxaad ku qortaa nambarka nambarka, magaalada, ama degmada
Liiska Bixiyaha Nooca Bixiyaha, dooro Xarunta
Click ah badhanka raadinta buluuga ah
Waxaa lagugu hagaajin doonaa a khariidadda 'CHCs' ee kuu dhow. Khariidada hoosteeda waa a liiska CHC-yada kuu dhow oo leh cinwaanno, macluumaadka xiriirka iyo bixiyeyaasha / takhasusleyaasha.
Qalabka Raadinta Bixiyaha
Ka baro wax badan oo ku saabsan adeegyada gaarka ah iyo meelaha gaarka ah ee mid kasta oo ka mid ah CHC-yadayada:
* Guji magaca rugta caafimaadka si aad u aragto faahfaahin dheeraad ah
Adeegga Caafimaadka Bulshada ee Columbia Valley (CVCH)
CVCH waxay bixisaa daryeel caafimaad, ilko, iyo daryeel caafimaad oo tayo leh qoysaska iyo shakhsiyaadka da 'kasta ha lahaadeene, iyadoon loo eegin awoodda wax lagu bixiyo. Waxay ka shaqeysaa 12 goobood oo ku kala yaal Wenatchee iyo Chelan, Washington.
Degmooyinka Chelan iyo Douglas
Ururka Caafimaadka Bulshada ee Spokane (CHAS)
Caafimaadka CHAS wuxuu bixiyaa caafimaadka dabeecadda, ilkaha, daaweynta hoormoonka transgender-ka iyo jinsiga aan u hogaansamin, nafaqada, dhakhaatiirta carruurta, daryeelka aasaasiga ah, farmashiyaha, adeegyada caafimaadka haweenka, iyo adeegyada daryeelka degdega ah. Waxay ka shaqeysaa 18 goobood oo ku kala yaal Cheney, Spokane, Clarkston, Deer Park iyo Spokane Valley ee Washington, iyo sidoo kale Moscow iyo Lewiston ee Idaho.
Daryeelka Caafimaadka Bulshada
Daryeelka Caafimaadka Bulshada wuxuu bixiyaa daawada qoyska, daryeelka carruurta, daryeelka dhalinyarada, caafimaadka haweenka iyo dhalmada, caafimaadka hab dhaqanka, daryeelka waayeelka, nafaqada, farmashiyaha, ilkaha iyo adeegyada tarjumaada. Waxay ka shaqeysaa shan xarumood oo ku kala yaal Tacoma, Lakewood iyo Spanaway, Washington, oo lagu daray Xarunta Caafimaadka Dugsiga Ku-saleysan ee Dugsiga Dhexe ee Bethel.
Xarunta Caafimaadka Bulshada (CHC) ee Degmada Snohomish
CHC ee Degmada Snohomish waxay bixisaa adeegyo caafimaad aasaasi ah, ilko iyo farmashiye. Waxay ka shaqeysaa toddobo goobood oo ku kala yaal Arlington, Edmonds, Everett iyo Lynnwood, Washington.
Caafimaadka Bulshada ee Bartamaha Washington (CHCW)
CHCW waxay siisaa in ka badan 30,000 bukaan oo ku nool Bartamaha Washington caafimaadka caafimaadka habdhaqanka, daryeelka waayeelka, qorsheynta qoyska, ilkaha, iyo adeegyada farmashiyaha. Waxay ka shaqeysaa toddobo goobood oo ku kala yaal Yakima, Ellensburg, Tieton iyo Naches, Washington.
Yakima iyo Degmooyinka Kittitas
Xarunta Caafimaadka Bulshada ee Dhakhtarka Dalka (CDCHC)
CDCHC waxay bixisaa farmashiyaha, kaalmada caymiska, iyo adeegyada kaalmada biilasha. Waxay ka shaqeysaa laba bukaan socod eegto oo aasaasi ah iyo hal rug caafimaad saacadaha dambe.
Xarunta Caafimaadka Qoyska ee Cowlitz
Xarunta Caafimaadka Qoyska ee Cowlitz waxay bixisaa qorsheynta qoyska, caafimaadka, caafimaadka dabeecadda, ilkaha iyo nafaqada, iyo sidoo kale barnaamijka dhimista daroogada isticmaalaha (IVDU) barnaamijka yareynta waxyeelada, daaweynta khalkhalka mukhaadaraadka iyo u gudbinta kheyraadka bulshada. Waxay ka shaqeysaa 14 goobood oo ku kala yaal Longview, Castle Rock, Kelso, Ocean Park, Castle Rock, Cathlamet iyo Woodland, Washington.
Degmooyinka Cowlitz, Pacific, iyo Wahkiakum
Xarumaha Caafimaadka Qoyska
Xarumaha Caafimaadka Qoysku waa nidaam daryeel caafimaad oo dhameystiran oo bixiya daawada dabiiciga, caafimaadka dabeecadda, adeegyada maskaxda, daryeelka caafimaadka, caafimaadka carruurta, dhalmada iyo daryeelka haweenka, barnaamijyada ku xadgudubka mukhaadaraadka, farmashiyaha, daryeelka ilkaha / cudurada ilkaha, talaalka, iyo adeegyada daryeelka joogtada ah. Waxay ka shaqeysaa toban goobood oo ku kala yaal Brewster, Bridgeport, Omak, Okanogan, Oroville, Tonasket iyo Twisp, Washington.
Degmooyinka Douglas iyo Okanogan
HealthPoint waxay bixisaa daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, ilkaha, farmashiyaha, daryeelka degdega ah, caafimaadka dabeecadda, nafaqada, dhalmada dhalmada kahor, acupuncture iyo adeegsiga daaweynta cilladaha mukhaadaraadka. Waxay ka shaqeysaa 17 goobood oo ku kala yaal Auburn, Bothell, Seattle, Federal Way, Kent, Des Moines, Redmond, Renton, SeaTac iyo Tukwila, Washington.
Adeegyada Caafimaadka Beesha Caalamka (ICHS)
ICHS waxay u fidisaa adeegyo daryeel caafimaad oo jaban jaaliyadaha Aasiya, Dhaladka Hawaii iyo Jasiiradaha Baasifigga ah, iyo sidoo kale bulshooyinka kale ee aan adeegyada laga helin, ee Seattle, Bellevue iyo Shoreline, Washington. ICHS waxay bixisaa daryeelka aasaasiga ah, ilkaha, vison, caafimaadka habdhaqanka, taageerada caafimaadka, iyo adeegyada kahortaga waxbarashada ee in kabadan 28,300 oo shaqsiyaad ah oo ku kala nool toddobada meelood.
Xarunta Caafimaadka Beesha Muuse Lake (MLCHC)
MLCHC waxay bixisaa caafimaadka, ilkaha, farmashiyaha, nafaqada, adeegyada taageerada hooyada, umulisooyinka iyo umulaha, adeegyada caafimaadka hab dhaqanka ee qoyska oo dhan, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo shaqaalaha beeraleyda ah ee aan shaqada haysan iyo soogalootiga. Waxay ka shaqeysaa seddex xarumood oo ku kala yaal Moses Lake, Quincy iyo Ephrata, Washington.
Neighborcare waa bixiyaha ugu weyn ee adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka, ilkaha iyo daryeelka habdhaqanka ee loogu adeegayo bukaannada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa aan caymiska haysan, waayeelka dakhliga joogtada ah, soogalootiga iyo dadka guri la’aanta ah ee ku nool aagga Seattle. Waxay ka shaqeysaa in ka badan 30 rugaha caafimaadka, ilkaha iyo iskuulada ku saleysan Seattle iyo Olympia, Washington, iyo kooxaha daryeelka kala duwan waxay ku hadlaan in ka badan 55 luqadood iyo lahjadood.
Degmooyinka King iyo Thurston
CAAFIMAAD CUSUB waxay bixisaa adeegyo caafimaad, daryeel deg deg ah, ilkaha, farmashiye iyo adeegyo caafimaad oo dhaqan. Waxay ka shaqeysaa toddobo xarummo caafimaad oo bulshada ah iyo saddex kiliinikada ilkaha ee bulshada ah oo ku yaal Stevens, Ferry iyo Pend Oreille.
Ferry, Pend Oreille, Spokane, iyo Stevens Degmooyinka
Shabakadda Daryeelka Caafimaadka ee Waqooyiga Olombikada
Shabakadda Daryeelka Caafimaadka ee Waqooyiga Olombikada (NOHN) waxay bixisaa daryeel caafimaad oo heersare ah, oo buuxa - oo ay ku jiraan daawaynta qoyska, umulaha, dhakhaatiirta carruurta, daryeelka ilkaha, iyo caafimaadka dabeecadda. NOHN waxay ka shaqeysaa laba goobood oo ku yaal Port Angeles, WA waana Degmada Clallam ee ugu horraysa oo kaliya oo ah Xarunta Caafimaadka Bulshada ee Aqoonta Federaalka u leh.
Adeegyada Caafimaadka Beesha Peninsula (PCHS)
PCHS waxay bixisaa daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, kahortaga iyo soo celinta daryeelka ilkaha, la talinta caafimaadka hab dhaqanka, daaweynta cilladaha maandooriyaha, adeegyada farmashiyaha, u gudbinta bixiyeyaasha takhasuska leh, caawinaada isqorista caymiska, waxbarashada caafimaadka, adeegyada bukaan socodka ee caafimaadka iyo waxqabadka bulshada Waxay ka shaqeysaa 16 goobood oo ku kala yaal Bremerton, Belfair, Shelton, Kingston, Port Orchard, Poulsbo iyo Silverdale, Washington.
Degmooyinka Kitsap iyo Mason
Sea Mar Community Health Centres waxay siisaa caafimaad, farmashi, ilkaha, caafimaadka dabeecadda, caafimaadka kahortaga, daryeelka muddada-dheer, adeegyo guriyayn la awoodi karo, iyo adeegyo waxbarasho iyo dhaqameed bulshooyinka kala duwan ee Washington. Waxay ka hawlgashaa 90 xarumo caafimaad oo ku kala baahsan Galbeedka Washington.
Clark, Grays Harbor, King, Pierce, Skagit, Snohomish, Thurston iyo Degmooyinka Whatcom
Tri-Cities Caafimaadka Bulshada (TCCH)
TCCH waxay bixisaa daryeel sare, xarumaha caafimaadka ee iskuulka, caafimaadka haweenka, farmashiyaha, dawada qoyska, daawada gudaha, caafimaadka hab dhaqanka, ilkaha, vison, endocrinology iyo daryeelka degdega ah. Waxay ka shaqeysaa sideed goobood Kennewick, Pasco iyo Richland, Washington.
Degmooyinka Benton iyo Franklin
Daryeelka Midnimada NW
Unity Care NW waxay bixisay adeeg caafimaad oo tayo sare leh, ilkaha, farmashiye iyo adeeg caafimaad caafimaad muddo ka badan 30 sano. Waxay ka shaqeysaa toddobo goobood oo ku kala baahsan Bellingham iyo Ferndale, Washington.
Xarunta Caafimaadka Valley View
Xarunta Caafimaadka ee 'Valley View Health Center' waxay siisaa qoysaska iyo shakhsiyaadka da 'kasta leh adeeg caafimaad, ilko, caafimaad dhaqan, iyo adeegyo farmashiye isku dhafan, iyadoon loo eegin awoodda wax lagu bixiyo. Waxay hadda leedahay 13 goobood, oo u adeegta bukaanada ku kala baahsan Chehalis, Centralia, Morton, Olympia, Onalaska, Pe Ell, Raymond, Tenino, Toledo iyo Winlock, Washington.
Degmooyinka Lewis iyo Thurston
Yakima Adeegyada Caafimaadka Xaafadu waxay bixisaa caafimaadka hab dhaqanka, ilkaha, dawada gudaha, cudurada caruurta, farmashiyaha, daryeelka aasaasiga ah, araga iyo adeegyada caafimaadka haweenka. Waxay ka shaqeysaa lix goobood oo kala ah Yakima, Sunnyside iyo Granger, Washington, oo lagu daray Qeybta Caafimaadka ee Dooxada Hoose. Waxay ahayd Xaruntii Caafimaad ee ugu horreysay ee gobolka inay gaarto heerka ugu sarreeya ee ictiraafka ee suurtogalka ah maaddaama Guriga Caafimaadka-Bukaanka ee Xarunta Caafimaadka iyo rugaheeda caafimaad ay aqoonsan yihiin Guddiga Wadajirka ah.
Yakima Valley Farm Workers Clinic waxay bixisaa tababar shaqo, waxbarasho, adeegyada deg-degga ah, caafimaadka hab-dhaqanka, nafaqada, caafimaadka, ilkaha, fiisooyinka iyo adeegyada farmashiyaha ee muhaajiriinta iyo shaqaalaha xilliyada beeraha. Waxay ka shaqeysaa 26 goobood oo ku yaal Washington guud ahaan Grandview, Granger, Kennewick, Pasco, Prosser, Pullman, Spokane, Sunnyside, Toppenish, Walla Walla, Wapato iyo Yakima, Washington. Waxay ku leedahay 12 goobood oo dheeri ah Oregon, iyo sidoo kale unugyo guurguura oo u adeega bulshada deegaanka.
Benton, Franklin, Spokane, Walla Walla, iyo Yakima Degmooyinka
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Abriil 20, 2022